Indlu obutofotofo kunye 2 iterraces frente Hard Rock Hotel - I-Airbnb
Indlu obutofotofo kunye 2 iterraces frente Hard Rock Hotel
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguCesar
Localização privilegiada, ás margens da Represa Capivara, ibekwe eRio Tibagi kunye neParanapanema. I-Casa de luxo, ichibi lokuqubha elineengxangxasi, ii-suites ezi-3, umthamo we-hospedar 12 pessoas, ezifakwe kwikhondomu eyenziwe ngokukhululeka kunye nokhuseleko. I-Ronda náutica kunye ne-patrulha iiyure ze-24, ukuloba i-lake pra, i-trapiche, i-gourmeteria, i-espaços família kunye ne-esporte. Ukufikelela kwi-Asphaltado kunye nendawo yokutshisa akukho ndawo. Portaria iiyure ezingama-24. Iyafumaneka ukuba kuyimfuneko Heliponto kunye piste de pouso kunye decolagem de avião ✈️
I-Sem dúvidas okanye i-espaço ecetywayo ukuba ufumana indawo enelungelo nge-aspecto de uma peninsula, ekhaya intywiliselwe kubunewunewu condominium Estância Punta Del Este. Umbono wechibi kunye okanye i-por do sol ngokuqinisekileyo um espetáculo apart. Lazer kunye descontração iyonke para carregar suas baterias
Akukho complexo esportivo muitos motivos pra cuidar da saúde kunye nepracticar seu esporte ozithandayo:
Indawo yeFutebol suíço
Sinxibelelana neqela le-suporte, i-oferecemos serviço doméstico, imizobo yeefoto, umntu ogcina umntwana, umpheki wobuqu kunye nomqeqeshi wobuqu. Cada serviço solicitado haverá um preço complementar
Iilwimi: Italiano, Português